HomeSuuqa kala iibsigaKooxda heysata horyaalka Serie A oo ka fiirsaneysa in ay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara Man Utd
Kooxda difaacaneysa Serie A, Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Donny van de Beek sidookale yahay bartilmaameedka koowaad ee suuqa kala iibsiga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa go’aansaday inuu ka tago Ajax kuna biiro Old Trafford intii lagu jiray xagaaygaan, isagoo saxiixay heshiis waqti dheer ah.
Si kastaba ha ahaatee, kubad sameeyaha 23 jirka ah ayaa weli sugaya bilowgiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League, taas bedelkeedna ma helin waqti dheeri ah oo ciyaaro.
Sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda reer Talyaani ayaa haatan isha ku heysa xaalada iyagoo ka fiirsanaya inay u dhaqaaqaan kubad sameeyaha reer Holland sannadka 2021.
Inkastoo Red Devils aysan u badneyn inay tixgeliyaan dalab kasta oo marxaladdan ah, mowqifkooda ayaa laga yaabaa inuu isbeddelo haddii kooxda reer Talyaani ay diyaar u tahay inay bixiso lacag ka badan £ 40m xagaayga soo socda.
Isagoo ciyaaray kaliya 88 daqiiqo kubada cagta Premier League lix kulan, wakiilka Van de Beek ayaa horay u qirtay inuu ka careysan yahay macaamiishiisa la’aanta kubada koowaad.
Dhanka kale, kooxda weyn ee Seire A, Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay kooxaha waa weyn ka dhisan Premier League ee Manchester United iyo Liverpool in Nicolo Barella uusan iib aheyn qiimo kasta.
Liverpool iyo Man Utd ayaa dhamaantood lagu qiimeeyaa xiisaha kubad sameeyaha reer Talyaani, si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Calciomercato, Inter Milan ayaan diyaar u ahayn inay iska iibiso duruuf kasta ha ahaatee.